Tetikasa | Galeriana ROYI ART
IREO TRUST ROYI ART
Manaja ny tsiambaratelon'ny mpanjifanay isika ary tsy afaka mamoaka lisitr'ireo mpanjifanay fa tafiditra ao anatin'ireo marika lehibe sy be haja indrindra eto an-tany izy ireo.
Mifandraisa aminay, vonona izahay hamorona sanda manatsara ny fifaninanana.
Manome hosodoko an-jatony ny mpivarotra sy mpivarotra entana manerana izao tontolo izao izahay isam-bolana.
Mazava ho azy fa manaja ny tsiambaratelon'ny mpanjifanay izahay ary tsy afaka mamoaka ny lisitry ny mpanjifanay fa anisan'ireo marika lehibe sy be haja indrindra eto an-tany izy ireo, maro amin'izy ireo no anaram-pianakaviana manerantany.
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa izay toa mampiavaka ihany
Miaraka amin'ny fandefasana ny kanto kanto avo lenta, manome serivisy serivisy ihany koa izahay izay hitanao amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny zotra avo lenta ihany. Ny dingana rehetra amin'ny fomba ahafahanao miantso telefaona sy miresaka aminay - na manontany momba ny fisafidianana sary hoso-doko ianao, manamarina ny toeran'ny baiko na mangataka fanovana. Ny ekipa serivisy mpanjifa dia misy 24 ora isan'andro amin'ny Internet.
Raha ao amin'ny varotra na mpivarotra indray ianao toy ny Art Gallery, Photo Framer, Designer anatiny, Toeram-pivarotana, Mpanorina, Architect, Antique Store, Arts & Crafts Store na fivarotana fivarotana, dia manolotra fihenam-bidy manokana sy tombony manokana isika izay tsy hita ao amin'ny tranokalanay ankapobeny.
Vonona izahay hanome anao fihenam-bidy manokana momba ny varotra ary mamela sanda famoronana izay manatsara ny fifaninanana!
Contemporary Oil Painting , Abstract solika hanao hoso-doko , filanjana-ponja , diloilo hanao hoso-doko amin'ny lamba , -tanana solika hanao hoso-doko , Oil Painting , ny rehetra Products